Kunyaka odlulileyo, intengo ehlawulwayo imoto entsha yayingaphezu kwama-32,000-$ - kodwa ukuba unentsapho ukuhamba ngeenxa zonke, akukho sizathu sokuchitha phi na kufuphi. Ndibekwe ukufumana iimoto ezilishumi ezintle zentsapho ezifakela i-$ 20,000 okanye ngaphantsi nge-automation transmission. Apha, ngo-alfabhethi, zikhethi zam ezilishumi.
IKrovrolet Cruze. Ifoto © Aaron Gold
Ukuba ufuna ukuthenga i-American, i-Cruze yinto ekhethileyo-nakuba ubemi bayo akuyiyo kuphela isizathu sokuyithenga. I-Cruze iyimoto evulekile kunye nesiqu esivulekile, kwaye ikhuselwe kakuhle kunye ne-airbags ezilishumi (ngaphezu kwayo nayiphi na imoto kuleluhlu) kunye ne-OnStar, inkqubo yokubhalisa eza kucela ngokuzenzekelayo uncedo ukuba i-Cruze isengozini. Ixabiso lentengo liqala phantsi kwe-$ 17k, kodwa uhlahlo lwabiwo-mali lwama-20,000 luya kufumana imodeli ye-LS eneenkcukacha ezifanelekileyo ngokuhambisa ngokuzenzekelayo. I-Cruze yinto yokwakha, kodwa iyimoto yentsapho eqinile-yam intsapho kwaye ndichitha iinyanga ezintandathu ngenye kwaye ndacinga ukuba yayiyiqoqo elimangalisayo lamavili.
Funda okunye: Ukuhlolwa kwe- Chevrolet Cruze - I- Chevrolet Cruze Eco yovavanyo lweenyanga ezintandathu
Hodna Civic. Ifoto © Aaron Gold
I-Civic sedan ihamba ngokusondeleyo njengoko unokufumana into eqinisekileyo. Nangona ngokusemthethweni i-compact car, inkulu ngaphakathi ngaphakathi njengesiqingatha-mbini Izivumelwano ezivela kwiminyaka embalwa eyadlulayo kwaye ukuba yi-Honda, iya kusebenza kude kube ilanga liphuma esibhakabhakeni ukuba uyayinyamekela. Ngoku, ngokwezobugcisa, i-Civic yincinci yebhajethi-ibhasi; imodeli ye-entry-level yeLX (equka iifestile zamandla, ukukhiya kunye nezibuko, i-Bluetooth kunye nokulawula iinqwelo) iqala kwi-19,310 yee-dollar kwaye idibanisa ukutshintshela ngokuzenzekelayo uluhlu lwamanani ukuya kuma-20,110. Ngenxa yokunyaniseka kwayo, i-Civic yindoda yokuthenga ixesha elide, kwaye ndicinga ukuba ixabiso lemali.
Funda okunye: Ukuhlaziywa kwe-Honda Civic
Honda Fit. Ifoto © Aaron Gold
Le yenye yemoto yam intandokazi kuloluhlu. Ekubonweni kokuqala, i-Fit ibonakala ingancinci ukuba ibe yintanethi yemoto, kodwa le yenye yezona zithuthi ezichanekileyo zendawo. I-Fit inomhlaba omkhulu weengxowa ngeendawo eziphantsi, ezigqibeleleyo ngeetoni zezinto zokuzalwa zabazali abazali abaqala ukuzenza, kunye nesitulo sangasemva sinamagumbi amaninzi nakumlenze kunama-SUV amaninzi, oku kuthetha ukuba iya kuhlala bonke kodwa abantwana bezona zide kunene kwisikolo esiphakamileyo (kwaye unikezwa idumela leCommet for quality building quality, iFit yakho inokuthi ihlale ixesha elide). Nangona i-Fit ixabiso elincinci ngemilinganiselo ye-subcompact, ihamba ngokukhawuleza kwi-budget ye-20k ye-20k: Ixabiso lentengo li-$ 16,470, kwaye i-19,180 i-$ i-EX imodeli nge-alloy wheels, i-stereo ehambelana ne-Pandora kunye ne-Bluetooth. ikhamera ebonakala ingaboniyo.
Funda okunye: Ukuhlaziywa kwe-Honda Fit
Jeep Patriot. Ifoto © Chrysler
Ukufumana i-SUV ngentengo phantsi kwe-$ 20,000 akulula, kodwa i-Jeep isinika isandla esincedisayo kunye nePatriot. Ngoku, ndimele ndikuqaphele, i-$ 20k ayikufumani ezininzi iimpawu - uza kukhangela umzekelo wesiseko wezemidlalo, ongenakho imimoya yomoya, kwaye uhlale ngaphantsi kwe-$ 20k kuthetha ukuthabatha ukuhamba ngokuzenzekelayo okanye ezine- ukuhamba ngevili, kodwa kungabi bobabini (ukuba ufuna iibini kunye, uluhlu lwamaxabiso luyi-$ 21,195). Kodwa i-Patriot ineembonakalo ezibukhali ezenza umdlalo weJeep ukhangeke, kwaye uJason, isiKhokelo sethu kwi-SUVs, ufumene into enokuyithanda kwi-Patriot yomzekelo xa evavanya embalwa kwiminyaka embalwa. I-Patriot iya kutshintshwa ngu-2015 uRenegade; iyimoto engcono kakhulu inendawo eneendawo ezininzi zangaphakathi, kodwa iimodeli ezihamba phambili ezihamba phambili zithengwa kwi-$ 21,685, idlulile kwi-budget yethu.
Funda kabanzi: Uhlolo lweJep Patriot
Kia Soul. Ifoto © Kia
I-Kia Soul ye-boxy body ijoliswe njengesitatimende sokuyila, kodwa iphinda iphendule uMoya ibe yinqwelo yekhaya ebalaseleyo. Isihlalo sangasemva sinobuninzi bemilenze- kunye negumbi lekhanda, oku kusebenzayo akusiyo nje ukukhula kwezingane, kodwa kubazali kufuneka bathembele ekubambeni abantwana babo kwizihlalo zeemoto. Kwaye i-boxy cargo bay inikezela indawo eninzi yabahambahambayo, iibhegi zebhanki, iiprojekthi zobugcisa ezinamandla, okanye nayiphi na abantwana bakho kufuneka bahambe nabo. I-Kia iphinda ivuselele uMphefumlo wonyaka odlulileyo, kwaye yanikezela ngekhwalithi yangaphakathi kunye neempawu zokuqhuba ukuqhuba imoto eninzi kakhulu. Ii-20,000 zamaRandi zithenga phakathi kwe-Soul Plus, kunye neBluetooth, iivili ezinamavili, ukuhanjiswa kwe-othomathikhi, kunye ne-warranty ye-epic - iminyaka engama-5 okanye i-60,000 iikhilomitha kwimoto yonke kunye neminyaka eyi-10 / i-100,000 iikhilomitha kwi-injini, ukuhanjiswa, kunye ne-driveline. Umphefumlo uyindlela ephathekayo kunye nezindleko zokukhupha intsapho yakho.
Funda okunye: Ukuhlaziywa kwe-Kia Soul
2015 Nissan Versa. Ifoto © Aaron Gold
Akukho mbuzo, iVersa yiyona nto ibalulekileyo yentsapho-inqwelo yemoto kwimarike. Imodeli yesiseko iyona nto ininzi imoto eyabiza i-America - kodwa ke inendawo engaphakathi kunye nesikhala semoto ephakathi kwamaninzi, kunye nokwakhiwa kwayo njengendlu yezicathulo zetena. Ixabiso lentlawulo yesiseko liqala ngaphantsi kwee-13,000 zamaRandi, kwaye i-$ 20k ungayifumana imodeli ye-SL epheleleyo epheleleyo enevili kunye ne-alloy wheels, kunye ne-navigation-kwaye ufumana i-$ 1,500 eyi-$ emva kweenguqu! Kwiintsapho malunga nohlahlo lwabiwo-mali, ndincoma i-$ 16,355 yeVersa SV ndivavanywe nje; inayo yonke imoto yentsapho kufuneka i-haves (A / C, ukukhiywa kwamandla, ukungena okungenanto) kunye nokuthunyelwa ngokuzenzekelayo, konke malunga nesiqingatha semali yemoto entsha.
Funda okunye: Ukuhlaziywa kweNissan Versa
2013 Scion xB. Ifoto © Aaron Gold
U-Scion akenzanga lukhulu ukuhlaziya i-xB kuba beyifake ngo-2008, kwaye andinakukwazi ukucinga ubomi, ndicinga ukuba kutheni, ngenxa yokuba imoto eyimfuneko. I-xB inikeza isikhala somgibeli kunye nesithuba sendawo ye-SUV encinci, kodwa kwiphakheji yokuphakama kwemoto-kwaye oko kuthetha ukulayishwa lula kwezingane kunye nezinto ezihlala zihamba kunye ne-em. Esikhundleni sokhetho lwefowuni, i-Scion inikeza i-xB kwimodeli enye eneempahla ezifanelekileyo, kunye neendlela ezininzi ezifakwe kumthengisi ukulungiselela ukwenza imoto ngokuyithandayo. Uzakufuna ukufumana imoto ekhululekile kwezi zongeza xa unethemba lokufumana enye yexabiso le-$ 18,840. (I-Scion inomgaqo-nkqubo wexabiso, ngoko ke intlawulo ye-sticker yiyo uza kuhlawula.) I-xtra's powertrain ithetha ukuba akuyona nje indawo ye-fuel-economy, kodwa kunye neekota ze-Toyota phantsi kwe-hood, -kuba uScion kufuneka abuyele kwiminyaka engenazo izithuthi.
Funda okunye: Ukuhlaziywa kweScion xB
Subaru Impreza. Ifoto © Subaru
Ukuba uhlala apho kulala khona, i-wheel-drive (i-AWD - inkqubo ehambisa amandla oonjini kuzo zonke iivili ezine endaweni yesigatya esinye) ikunika ingakumbi ukugcina intsapho yakho iphephile. Uninzi lwabantu ludibanisa i-AWD kunye ne-SUV, kodwa i-Subaru iye yachitha amashumi eminyaka yenza yonke imoto-wheel drive yonke into ekwazi ukukhwela kwikhephu. Eyona mininzi ifikelelekayo yile yiNgxelo; ixhotyiswe ngokuthumela ngokuzenzekelayo, imodeli ye-2.0i ivele ihambe phantsi kwexabiso lethu lemali kwii-19,990 zamaRandi (kunye nokuthunyelwa kweencwadi, ixabiso elincinci). Yaye ukuba ufuna ukusetyenziswa kweSUV, i-Subaru ine-hatchback version ebiza i-$ 500 ephezulu. I-Subarus iyakhiwe kakuhle kwaye ihlala iinqwelo ezinokuhlala zithembekileyo, kwaye iNprepreza yindlela enkulu yokunceda intsapho yakho iphephile xa isimo sezulu sizama ukungena endleleni yakho.
Funda ngakumbi: Ukuhlaziywa kwe-Subaru Impreza
Toyota Corolla. Ifoto © iToyota
I-Corolla liziko: Phantse iminyaka engamashumi amahlanu, i-sedan sedan i-little sedan ifana ne-motoring. I-iteration yakutshanje i-snazzier styling kuneColollas yangaphambili, kwaye isitulo sayo sangasemva sinokuphinda kunomdla kunokuba ndimthanda kakhulu, i-Honda Civic. Ngokungafani ne-Civic, akumele uzinamathele kwi-model model ukuze uhlale phantsi kwe-$ 20,000: I-Corolla L eqalayo iqala phantsi kwe-$ 18k kunye ne-LE-middle level kunye neenlist zokuthumela ngokuzenzekelayo ze-19,340 zamaRandi. Ukuba ndiza ku-100% inyanisekileyo, ndimele ndixelele ukuba i-Corolla iyimoto endiyinkxalabo yokufumana umdla; Ndicinga ukuba i-design yangaphakathi yinto engaqhelekanga kwaye isipiliyoni sokuqhuba kakubi kakhulu, kodwa andiqinisekanga ukuba i-Corolla iya kukunyamekela umnikazi wayo (kunye nentsapho yakhe) ekuhambeni kwexesha.
Funda okunye: Ukuhlaziywa kweToyota Corolla
Volkswagen Jetta. Ifoto © Aaron Gold
Awukwazi ukufumana i-sedan yobukhulu bendawo yobukhulu obungaphantsi kwama-20, kodwa ungakufumana udibene eduze neJetta, eyakhiwa yayizikhulu "ezihlukeneyo" eziphezulu zendawo egumbini elingaphandle kunekhampani eqhelekileyo kodwa kulula ukupaka ngaphezu kobukhulu obuphakathi. Ngoku, iVolkswagen inomzekelo wesiseko onokuba nakho ukuhambisa ngokuzenzekelayo ngaphantsi kwe-$ 20k. Kubizwa ngokuba yiJetta 2.0 S, kwaye ndiyancoma ukuba uhlawule; injini yayo ivukisayo kwaye ixhaswe phantsi. Lowo ufunayo yiJetta 1.8 SE, ene-injini entsha entsha ene-turbocharged injini enika amandla amakhulu kunye noqoqosho lwamafutha. I-SE ixabiso eli-$ 19,815 nge-transfer manual, endiyincoma kakhulu; i-stick-shift eyenza ininzi yeendlela zeJetta zendlela yaseJalimane kunye noluntu olumnandi. I-trans ye-othomathikhi iqhube ixabiso le-SE ukuya kuma-20,915, kodwa ukuba uthanda ukuqhuba, kulungele ukuba uhlahlo lwabiwo-mali.
Funda okunye: Ukuhlolwa kweVolkswagen Jetta
Izizathu zokuthenga i-Minivan
Iinqwelo eziMaqashisayo ezintsha
I-Civic 2.2 i-CTDi Test Test Diesel
I-Einsteinium Facts - Element 99 okanye Es
Ukuphela koBukumkani baseRoma
Indlela yokubala ngesiTaliyane
Iimfuneko zokudibanisa - Uludwe lweDivhu yeeDivhu
Yintoni iGrferfer Scratch?